Semalt: Wordfence सुरक्षा संग तपाईंको वर्डप्रेस साइट कसरी सुरक्षित गर्ने
अहिलेसम्म, वर्डप्रेस सबैभन्दा प्रसिद्ध र व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीको रूपमा मानिन्छ। तर हामी तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं कि यो सही र सुरक्षित छैन किनकि धेरै दुर्भावनापूर्ण हमलावरहरुले तपाईको साइट घुसाउनका लागि तरिका र तपाइँको प्रणालीलाई ठूलो हदसम्म क्षति पुर्याउने तरिकामा काम गर्दछ। यदि तपाइँले वेबसाइट बनाउनुभएको छ वा पहिले नै व्यवसाय चलाइरहेका छन् भने, यो तपाईंको वेब पृष्ठहरू सुरक्षित र यस सम्बन्धमा केही प्रविधिहरू सिक्न महत्त्वपूर्ण छ।
'Wordpress सुरक्षा र प्रसिद्धि काममा आउँछ, र त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन तपाइँका साइटहरूलाई शीर्षमा तलबाट सुरक्षित राख्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ। Wordfence सुरक्षा एक यस्तो प्रणाली हो जुन तपाईंको साइट को सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ, र यहाँ जूलिया वशिनावा, एक शीर्ष विशेषज्ञ सेल्टल्ट को तपाईंलाई बताछन कि यसलाई कसरि सर्वोत्तम उपयोग गर्ने।
Wordfence सुरक्षा प्लगइन को परिचय
Wordfence सुरक्षा प्लगइन केवल केहि मान्छे द्वारा स्थापित गरिएको छ र एक पुरा तरिकाले विशेष रुप देखि वर्डप्रेस प्लगइन हो। यो WordPress को प्लगइन खण्डमा अवस्थित हुन सक्छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको साइटहरू व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउँछ। उनीहरूले यस प्लगइनको प्रयोग गरेर उनीहरूको साइटहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दछ किनभने यसको केही सुविधाहरू छन् र अघिल्लो प्रयोगकर्ताहरु बाट अत्यधिक प्रतिक्रिया पाएका छन्। यो विकल्प र विशेषताहरु को एक मुट्ठी संग आफ्नो अपेक्षाहरु लाई आउन को लागि आउछ।
यस प्लगइनले तपाईंलाई वर्चस्व साइटहरूलाई सम्भावित हानिकारक, बटहरू, भाइरस र मैलवेयरको लागि स्क्यान गर्न दिन्छ। यदि केही खतराहरू दिनभरि पस्छ भने यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई इमेल मार्फत अलर्ट गर्दछ। यसले उन्नत लगइन विशेषताहरू र सुरक्षा उपायहरूको साथ समर्थन प्रदान गर्दछ। अन्तिम तर कम्तिमा होइन, यो प्लगइन सबै आईपी ठेगानाहरूलाई ब्लक गर्न सक्छ जुन संदिग्ध देखिन्छ र तपाईंको साइटहरूमा नकली ट्राफिक पठाइन्छ।.
Wordfence सुरक्षा प्लगइन सेट अप गर्नुहोस्
यो Wordfence सुरक्षा प्लगइन सेटअप गर्न सरल छ। यसका लागि, तपाईंलाई केहि चीजहरू सम्झन आवश्यक छ:
1। लगइन सुरक्षा उपायहरू स्थापित गर्ने पहिलो कुरा हो। तपाईँले Wordfence प्लगइन क्लिक गरेर र सक्रिय गरेर यो प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईंले आधारभूत विकल्प खण्ड खोज्नु पर्छ र सुरक्षा सक्षम गर्न बक्सलाई टिक्न पर्थ्यो। एक पटक यसलाई सक्षम भएपछि, तपाईंलाई ध्यान राख्नुपर्छ कि पासवर्ड परिवर्तन गर्न सकिँदैन, त्यसैले यसको बहुविध समय प्रयास गर्न आवश्यक छैन। यदि तपाइँ यो गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको साइटलाई अस्थायी रूपमा वा स्थायी रूपमा ब्लक गर्ने सम्भव छ।
2। दोस्रो कुरा नियमित रूपमा तपाईंको साइटको स्क्यान प्रदर्शन गर्दैछ। प्राय: प्रायः मानिसहरू स्क्यानिङ गर्ने साइटहरू अनदेखा गर्छन्, र यो जहाँ ह्याकरहरू सक्रिय हुन्छन्। Wordfence स्क्यानले तपाईंलाई आफ्नो साइटलाई पूर्ण रूपमा जाँच गर्न दिन्छ, र यदि तपाइँ कुनै पनि यदि दुर्भावनापूर्ण चीजहरू र संक्रामक ढाँचाहरूबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ।
3 Source . तेस्रो र अन्तिम चरण भविष्यको लागि सुरक्षा अलर्टहरू सेट अप गर्दै छ। यसका लागि, तपाईंलाई Wordfence Security मा सुरक्षा सतर्कता सेक्शनमा जानुपर्छ। तपाईंले यसलाई सक्षम गर्नुपर्छ र सुरक्षा इ-मेलहरूको बारेमा सूचनाहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ जुन इमेल ठेगाना सम्मिलित गर्नुहोस्।
WordPress सुरक्षालाई प्रदानको लागि कहिल्यै लिन सकिँदैन। एक पेशेवर वेबसाइट मालिक को रूप मा, यदि तपाईं इंटरनेट मा आफ्नो साइट को रैंकिंग मा सुधार गर्न चाहते हो सबै प्रकार को मैलवेयर र बट्स देखि छुटकारा प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको जिम्मेवारी छ।